Construction Development bill sent to parliament | Myanmar Business Today
HomeBusinessLocalConstruction Development bill sent to parliament
The Ministry of Construction has drafted and sent the Construction Industry Development Bill to the parliament aiming to standardize all the requirements and standards for real estate development.
This bill, developed with assistance from KOICA in 2018, also aims to make sure the quality of the buildings is met, which will be checked by the ministry’s ISO lab.
The Ministry of Construction will form quality control teams to ensure developers meet the rules, regulations, and requirements in developing real estates.
မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် စံချိန်စံညွှန်းများ တစ်ပြေးညီ ဖြစ်စေရန်အတွက် ရေးဆွဲထားသည့် ဆောက်လုပ်ရေး ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဥပဒေကို ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်သို့ တင်ပြထားလျက်ရှိကြောင်း ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။
အဆိုပါ ဥပဒေကို ရေးဆွဲရခြင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်း အဆောက်အဦးများ ဆောက်လုပ်ရာ၌ အရည်အသွေး တစ်ပြေးညီဖြစ်ကာ ကောင်းမွန်စေရန်၊ အချိန်မီပြီးစီးစေရန်အတွက် လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပြီး အဆောက်အဦးအရည်အသွေး စစ်ဆေးခြင်းကိုလည်း အဆောက်အဦး ဦးစီးဌာနရှိ ISO ဓာတ်ခွဲခန်းမှ ဆောက်ရွက်ပေးနေလျက်ရှိသည်။
၀န်ကြီးဌာနအနေဖြင့် နောက်ပိုင်းတွင် ထိန်းသိမ်းကွပ်ကဲရေး အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းကာ လိုအပ်သော စဉ်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများ၊ နည်းပညာပိုင်းများနှင့် အရည်အသွေးပိုင်းများကို မှန်ကန်စေရန်အတွက် ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဉပဒေကို ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ KOICA ၏ အကူအညီဖြင့် ရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်ကာ ဉပဒေမူကြမ်းကို ၂၀၁၈ခုနှစ်တွင် စတင်ရေးဆွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Previous articleMinistry has provided K30 mln to workers whose jobs are suspended
Next articleU.S. House passes $3 trillion coronavirus aid bill opposed by Trump